Nahoana aho Hanambady Dia Young? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Nahoana aho Hanambady Dia Young?
Omaly no nanao tara nijanona alina tao amin'ny fivarotana mba haka zavatra vitsivitsy, ary dia nanana resaka tena mahaliana ny cashier. Nanao lahateny kely izahay rehefa scanned ny zavatra, ary avy eo dia nanolotra ahy ho karatra fihenam-bidy Nilaza taminy aho fa ny vadiko efa nisy iray. Izay raha ny resaka nahazo fahafinaretana. Fantatro izany resaka rehetra, tsara loatra, satria nanana azy aho matetika eo anatrehan'i. Izany dia mitovitovy amin'izao ...
olona: Inona!? Manambady ianao?
Me: Yeah aho nanambadiana roa sy tapany mahagaga taona.
olona: Firy taona ianao? Ianao mijery tahaka ny zazakely.
Me: Telo amby roa-polo aho.
olona: Ianao dia tanora! Nahoana no amin'izao tontolo izao no hataonao fa?
Me: Nahoana no tsy nety I?
In 2009, Nanambady aho amin'ny zara raha ara-dalàna, ary zara raha kaja iray taona roa-polo taona. Nandritra ny fiarahana, andraikitra, ary fohy ny fanambadiana, Aho no nanontany ny fotoana sy ny fotoana indray ny fanontaniana toy ny, "Nahoana no hanambady dia tanora? Inona ny zozoro?”, sy ny toerana tena manokana, "Tokony ho niandry sy nahafinaritra ny fiainanao!”
Ny sasany tamin'ireo olona tatsy mametraka ireo fanontaniana ireo vahiny, fa ny sasany dia family. Nisy adala aho mba hanambady amin'ny toy izany "tanora” taona?
Eny ary aoka aho handroso antony telo Nanapa-kevitra ny hanambady, rehefa nataoko.
1. I Nihaona tamin'ny vehivavy araka an'Andriamanitra
Toy ny valo ambin'ny folo taona freshman in Bible oniversite, Aho tsy tena mitady vady, nefa hitan'Andriamanitra fa mety ny hampahafantatra ahy ny zatovovavy araka ny fony. Tsara tarehy izy, fa zava-dehibe kokoa izy tia an'i Jesosy. Fantatr'i izy fa mbola mpanota mila fahasoavan'Andriamanitra, Ary izy nanana manetry tena, mora ampianarina fo. Niafara ho anisan'ny fiangonana ihany, noho izany dia tonga mba hijery azy hanompo, mitombo, ary amim-pahatokiana omeo fotoana ny olon-kafa. Nanomboka niresaka ny ny anaty faribolana momba azy. Ireo namako, mpanoro hevitra, ary ny pasitera nanaiky rehetra – izy araka an'Andriamanitra vehivavy. Hitako ny tenako nandeha niaraka taminy, ary tia azy mandritra ny androm-piainako.
2. Vonona aho
By izany fotoana izany aho dia nanomboka nieritreritra momba ny zava-misy ny fanambadiana sy ny dikan'ny hoe manolo-tena ny olona iray mandritra ny androm-piainany. Nanontany tena aho na tsia aho matotra sy tompon'andraikitra ampy. Aho nandinika ny Soratra Masina, ary nieritreritra momba ny andraikitry ny lehilahy manambady, ary niresaka ny manambady namana sy mpanoro hevitra. Taorian'ny vavaka sy ny maro ny resaka, ny mpanoro hevitra sy ny mpitandrina ao amin 'ny fiangonako nilaza tamiko izy ireo nieritreritra fa vonona aho ny hanenjika azy. Faly aho. Fa tsy tiako tsy ho nanenjika azy, raha nieritreritra aho dia tsy vonona ara-panahy hitarika azy, hanome ho azy, ary mba ho ny lohan'ny fianakaviana.
3. Ny fanambadiana dia fitahiana
Tamin'ny voalohany dia nahatsapa toy ny tsy maintsy nanaporofo ny naysayers izay hanambady tanora dia OK indraindray. Fa rehefa nijery ao amin'ny Soratra Masina dia tsy nahita zavatra toy ny, "Ny fanambadiana mira fahafatesana! Mandosira avy amin'izy io!” na, "Ataovy ny fanambadiana eny mandra-tsy nataony intsony intsony,” na, "Ihany no manambady rehefa antitra loatra ianao hankafy ny fiainana,” na, "Play an-tsaha nandritra ny fotoana kelikely, ary avy eo dia naka ny tsara indrindra.”
Tsy hitako didy toy ny, "Mandosira ny filan'ny tanora”, ary namaky andinin-teny toy ny Ohabolana 18:22 izay milaza, "Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa ary mahazo sitraka avy amin'i Jehovah.”
Ary ny olona hoe:, "Inona no nahazo anao mba hanambady tanora toy izany?” ny vaovao valinteny dia, "Ianao fanontaniana mangataka ny diso.” Heveriko amin'ny fototry ny fanontaniana dia eritreretina fa ny fanambadiana mangalatra zavatra hiala amiko, toy ny fahatanorako no efa lany amin'ny sorona manolo-tena ny fitiavana, raha azo ampiasaina izany ho an'ny fahafinaretana Lalaom-pirahalahiana sy ny flakiness.
Ny fanambadiana dia tsara tarehy fanomezana avy amin 'Andriamanitra! Izany dia fomba ny fahasoavana. Nahita vady, ary izay zavatra tsara. Tsy manaiky ny lojika izay milaza, esory ny fitahiana sarobidy indrindra raha mbola azonao atao. Kosa aho hoe hahazo tsara ny fanomezam-pahasoavana sy mpitantan-draharaha azy ireo noho ny voninahiny.
Tsy ny milaza fa ny olona rehetra dia tokony hanambady, rehefa nataoko. Tsy ho lasa ratsy raha ho niezaka hanambady alohan'ny vonona aho. Ny sasany amintsika no mila matotra bebe kokoa, ary ny olon-kafa isika dia mila mivavaka ho afa-po sy matoky ny Tompo sy ny fotoana. Ny tanjona dia tsy ny milaza fa ny tanora manambady ianao, masina dia vao mainka ianao. Fotsiny aho te-hanala ny angano fa tokony olon-dehibe mangataka andro, ary indray mandeha ihany no mihevitra ny fanambadiana izahay telo-polo no ho miakatra.
Last alina amin'ny twitter olona nanontany ahy raha hanambady Nanenenako ka tanora. ny valin-? Tsia dia tsia.
Izany no iray amin'ireo fanapahan-kevitra tsara indrindra ve aho nanao. Faly kokoa aho sy masina, fa tsy tamin'izaho roa taona sy tapany lasa izay, ary izany no zavatra tsara. Tsy te natao ho toy tahaka aho faran'izay tsy fahita firy ny sasany Manjary. Fantatro be dia be ry namana izay nanambady toy ny tanora, na tanora kokoa noho ny fitiavany Ahy. Koa izy ireo nahita ny fanambadiana ho toy ny fanomezana ary dia efa nahita izany ny vokatry ny fanomezana. Me ary ny vadiko dia mety ho tanora ankehitriny, fa nivavaka aho ny fahasoavana ho tia ny vadiko tsara mandra-pahatapitry ny fiainantsika. Mandra-pahatongan'izany dia te hankatò ny fahendrena ao amin'ny Ohabolana sy ny 'hifaly amin'ny vadiny ny fony aho mbola tanora.”
Jannon Fitzpatrick • Aogositra 19, 2013 amin'ny 6:58 aho • navalin'i
Tamim-panajana aho, tsy mitovy hevitra amin'ny Kevin Ferere. Tsy afaka mahalala ny fitiavana mandra fantatro hoe iza Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana! Ny Baiboly tsy milaza na inona na inona ny hampiaraka manodidina na hiresaka amin'ny hafa ny mahita fa ny iray. Raha ny tena izy, Isaka layed tamin'ny amin'ny Rebecca ary nahafantatra izy no anankiray ho azy. Tsy nanao daty manodidina, na miresaka an'i Lea ho toy izany no tsara kokoa raha toa izy ka ho fantany na tsia i Rahely tena izay tiany na tsia.
Miteny avy amin'ny zavatra niainako manokana, Nataoko daty ny hafa ary nahita ny fitiavana tsy. Tsy vitan'ny avy ny fifandraisana, fa avy amin'ny ray aman-dreniko’ sy anabavy’ fifandraisana. Ny olana dia, dia tsy fifandraisana miorina amin'ny Teny na ny fitiavana, ary izany no antony tsy ahavitana izay. Nataoko mahita Nohazavain'ny mpanompon'Andriamanitra iray, dia afaka miasa ny lalana efa hoe, Mino amin'ny fo manontolo anefa aho fa raha ho niandry sy niaro ny foko tamin'izay hafa ireo fifandraisana izay teny tsy marina ho ahy, Aho ho any amin'ny tsara kokoa sy tsy tapaka toerana, ny recieve ny vadiko avy amin'ny fomba fijery araka an'Andriamanitra ny vehivavy fa tsy ny vehivavy tapaka ny fomba fijery amin'ny entana hiasa amin'ny alalan'ny.
Tsy misy tsy fanajana natao, fa mino aho fa dia tena diso bodofotsy fanambarana izay mety tena Halaviriko fo tanora ao amin'ny lalana diso. (Google vaovao momba araka an'Andriamanitra mampiaraka vs. Modern Dating. Misy zavatra sasany tena tsara ao amin'ny tany.)
Deborahfatuade • Aogositra 19, 2013 amin'ny 6:59 aho • navalin'i
Izany no awsome
KevinFerere • Aogositra 19, 2013 amin'ny 6:59 aho • navalin'i
Ianao koa nizahany toetra Ahy marina. Ny Baiboly afaka milaza na inona na inona tiany, fa ianao zavatra rehetra tsy maintsy mandeha eny ny. Ary izay miantso an'Andriamanitra dia avy amin'ny fahatanterahan 'izay tena nampianatra sy ny zavatra niainana. Amin'ny farany, ny zavatra inoanao dia safidy, fa ny Anao fantatrao no napetraky eo amin'ny zava-misy.
ary Eny, ny fanambarana dia mety ho kely jeneraly, fa tokony horaisina amin'ny vary ny sira, toy ny na inona na inona.
Lokelani70 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:00 aho • navalin'i
Izaho koa amim-panajana fa tsy miombon-kevitra amin'ny Kevin Ferere.
Ny hany zavatra efa voaporofo fa ianao dia efa nanao fanapahan-kevitra feon'ny fieritreretana tsy miaina ny fiainanao ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, ny Malagasy. kosa, efa nanao ny fanapahan-kevitra mba hiaina ao anatin 'ny fanambadiana araka an'Andriamanitra, ny alalan 'ny teny. Ny zava-misy momba izany, iray dia tsy manana ny fahalalana manontolo ny bilaogy ity, raha tsy Andriamanitra no loha laharana eo amin'ny fiainan'ny olona iray.
Mivavaka ho REHETRA fanambadiana! TAHIN'ANDRIAMANITRA!
KevinFerere • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:00 aho • navalin'i
Efa nanao fanapahan-kevitra matotra mba hitady an'Andriamanitra ho an'ny tenako, fa tsy ny zavatra olona iray dia nampianatra ahy. Aza manahy, Nahazatra ahy ny ho tahaka anao.
AC • Oktobra 3, 2013 amin'ny 5:53 PM •
Te toa ny hoe, tsy afaka mahita an'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly izahay maty. Maty ny olona afaka manao na inona na inona. Andriamanitra mahita antsika.
Oh… Tena miala tsiny aho Kevin, tsy maintsy ho sahiran-tsaina. Ny Andriamanitra tompoiko dia tsy Andriamanitry ny tena mitady. Manahy, dia tsy sitraky 'Andriamanitra, fa tia eachother toraka izay tia antsika no! Tahaka ny efa nosoratako, Andriamanitra mametraka voalohany no ilaina mba hahatakatra tanteraka ny bilaogy ity, tahaka ny valin-manaporofo ny teboka. Enga anie ny zava-drehetra isika miteny sy manao ho mampifaly an'Andriamanitra. Andriamanitra anie hitahy ary tena mahagaga hariva.
Fru-Mukete Arnold • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:00 aho • navalin'i
Hahaha, hatrany mitady, dia hahita Azy- tsarovy ny zavaboary manambara Azy koa. Raha ny tena izy, I ll anao hevi-petsin'i, naka fotsiny ny Baiboly ka mandehana hanipy azy toy ny boky tantara manamarika ny filazana izany ary na dia manao tsianjery azy ireo dia, jereo ny boky hafa ary mampitaha ny filazana. Fa tena dia mila olona hanazava anao somethings, aza misalasala satria ianao mpikatsaka ny fahamarinana.
Raha mino an'Andriamanitra araka izay lazainao ianao, nahoana no mahatsapa fa mila mba hizahany toetra azy tokoa? Tsy manana ho an'Andriamanitra, satria Izy ao amiko. Izaho no Izy, ary Izy no ahy. Miala tsiny aho fa, tsy afaka mahatakatra fa afaka ianao?
Delinabini • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:01 aho • navalin'i
dia tsy mitovy hevitra ahoana no ho Andriamanitra ary ahoana moa no ho anao no tena mamorona ny tenanao raha toa ka Andriamanitra?
KevinFerere • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:01 aho • navalin'i
My ratsy, typo: *Tsy manana hizaha toetra an'Andriamanitra. *
Dia midika fa ny fanehoan-kevitra izay voalaza. Na inona na inona ao anatinareo, izany no ianao. Aza matahotra ny manaiky izany fahamarinana izany ianao satria nampianatra fa tsy mety izany.
Addis Hunter • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:01 aho • navalin'i
100 % miaraka aminao! Koa aho nahita ny vadiko amin'ny 20 ary herintaona taty aoriana dia nivady izahay. Efa maintsy mitovy ny miresaka amin'ny olon-tsy fantatra kisendrasendra, fianakaviany sy ny namany ary tiako mba hampaherezana anao tsy hivadika amin'ny Tompo sy ny mahafinaritra vadiny amin'ny zavatra rehetra izay discribed ny teny. Izaho sy ny vadiko ankehitriny 30 taona ary rehefa lazaiko olona efa aho “Soa ihany” nivady efa ho 10 taona, dia izay naneho fahatalanjonana!!! “Marina”?? Manao toy izany koa ny fanehoan-kevitra manjavozavo “mandany ny tanora” sns sns. Fa Andriamanitra no tena mamindra fo sy tsara ho antsika fa cant haneho amin'ny teny Sambatra aho fa nihaona tamin'ny vadiko aho, rehefa nanao. Tiantsika reminising eo amin'ny oniversite taona miaraka, ary manonofy ny zava-dehibe rehetra izay manana ny fiainana ho antsika mialoha! Manana isika 2 ankizivavy tsara tarehy sy zazalahy kely teny an-dalana (panetren-tena fa nivavaka ho an'ny taona ity ary Andriamanitra nanome) , (atually aho noho ankehitriny ;-))..ary couldnt ho azo antoka kokoa fa ny Devine firaisan'ny avy amin'Andriamanitra mba hitondra antsika hiara-.
mazava ho, dia tsy tonga lafatra (na dia namako toa mihevitra toy izany, satria isika hiatrika ny mahazatra dont tontolo izao olana ny tsy fahatokiana, tsy fanajana sy tsy miova mifamaly), Isika kosa anefa manana tsy fifanarahana, toe-po nitaredretra, dificulties ara-bola sns, ny maha samy hafa dia ny Miantehera Andriamanitra mba hitarika ny diantsika, manaja ny hafa sy hamantatra ny tsara indrindra mba tsy ho very FINOANA, fifandraisana, ary mitady tari-dalana avy amin'ny fanahy masina ho toy ny mpivady sy ny individually..My lehilahy no olona tsy manam-paharoa indrindra hatramin'izay aho nihaona ary samy mahatakatra fa ny tena mahasambatra ao an-tokantrano dia tsy manao na nividy “zavatra” mba ho sambatra eachother fa ny fahafantarana hoe iza moa isika ao amin'i Kristy, manaraka ny didiny momba ny fanambadiana sy be fitiavana ny hafa tsy misy fepetra, na inona na inona ny kileman-toetra na ny fomba mety “mahatsapa” tamin'izany fotoana , satria fantatrareo fa HAHASAMBATRA foana vonjimaika ho fihetseham-po izay lasa, fa ny fifaliana marina ihany dia avy amin'ny Tompo.
Enga anie ianao sy ny vadiny nandritra ny taona maro Sambatra FIFALIANA!!!
Tiako ny mozika ihany koa teny an-dalana ;)..
Josh • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:01 aho • navalin'i
Ianao ohatra lehibe ny tanora kristianina izay te hanome voninahitra an'Andriamanitra teny an-dalana izy ireo hanaja vehivavy! Misaotra anao! Natao fotsiny aho anjara, aho 22, ary manantena ny fanompoana ny Tompo eo amin'ny fanambadiana mandritra ny taona maro ho avy!
Johnny_renteria • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:02 aho • navalin'i
Mino izany na tsia fa nivady tamin'ny taona 18. Aho tsy mba vonona ny ho vady amin'ny heviny ara-bola aho; dia efa ny ray. Vao avy anefa aho nanolotra ny fiainako ho an'i Kristy, ary fantatro fa ny vehivavy izaho, raha tany no ho olona mitombo miaraka amiko. Ny olona manontany ahy ny zavatra mitovy ihany koa. Hitako ho mampalahelo anefa dia hita fa ny fanambadiana ho toy ny zava-dratsy. ankehitriny, Aho ary nieritreritra izany aho, tonga tao amin'ny famaranana ny olona no lasa tia tena fa ny eritreritra ny fandraisana andraikitry ny olona iray hafa efa azo atao. Ny fanambadiana dia tsy momba ny fotoana sy ny antony nivady fa momba ny hoe iza no mifantoka manodidina ny fanambadiana. Ary tokony ho an'i Kristy…
Debora • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:02 aho • navalin'i
mihevitra aho fa tsara enao r trip..i manana frnd izay nanambady @ 19 (nivady izy ireo hv 4 6 yrs NW)N lkng @ azy ankehitriny dia mahatsapa ankoatra ny fanekena an'i Kristy teo amin'ny fiainany dat no fanapahan-kevitra tsara indrindra e hatramin'izay izy nanao….na dia tsy maintsy miaiky aho tsy vonona 2 mahazo married..it mampatahotra ahy Kosy tsy tiako 2 ho mpijery 2 D tsy mety ny olona 4 D sisa ny fiainako Fa samy fantatro na oviana na oviana i Jesoa, dia aoka hanao safidy ratsy D…Manontany tena koa aho indraindray e hanambady rehefa mahazo izay rehetra te avy amin'i Jesosy N afaka na oviana na oviana brk ny hrt?….Ora fanapahan-kevitra tsara aho N U ankihiben-tànany ny GV 4 izay!:)
MNM103 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:02 aho • navalin'i
Izany mihitsy ny nampianatra ahy be dia be. Ary efa nandre vadinao be lafiny izany koa!
Lance Peterson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:02 aho • navalin'i
Awesome. Ny zanako lahy ihany koa nanambady 2 1/2 taona lasa izay, ho an'Andriamanitra mahafinaritra vehivavy ka dia samy efa antitra ny masaka ny 19. Nampahatsiahy ahy ny tantaranao amin'izy ireo.
Brandon Clements • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:02 aho • navalin'i
Tiako izany Trip! Nanambady aho amin'ny 22 ary tena tia ny fanambadiana. Tena mampihomehy fotsiny aho satria nisy resaka toy izany koa amin'ny tobin-tsolika mpanompony momba ny iray volana lasa izay. Izy nisintona ny rehetra, “Nahoana no hanambady, rehefa afaka manana ny ronono maimaim-poana?” fanontaniana sy ny foko ho azy tapaka. Dia nandeha nilaza taminy fa ny vadiko tsy omby–fa mbola mahatahotra, ary tiako izy.
Travel • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:02 aho • navalin'i
loool ianao mampihomehy = D
Louib2001 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:02 aho • navalin'i
Anna • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:03 aho • navalin'i
Izany Tena niteny tamiko. aho 21 amin'ny fifandraisana ary tsy afaka milaza aminareo hoe impiry aho no nilaza fa aho “tanora loatra tsy mieritreritra momba ny fandaminana teo”, Dia tokony hiandry ny “fiainana velona aloha”, hamita am-pianarana ary hanorina ny asa alohan'ny hiditra fiarahana alohan'ny / fanambadiana. Ianao manana fijoroana ho vavolombelona mahatalanjona sy manentana ny fanahy. Enga anie ianao sy ny vadiny mandritra ny fiainana ny fitahiana sy ny fahasambarana miaraka!
tsy fantatra anarana • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:03 aho • navalin'i
Izaho dia 20 ary mbola tsy teo amin'ny fifandraisana toy izany dia tsy handeha aho ny hivady ny 21 fa Tena Manaja ny lojika. I foana ny fisainana “tsirairay ny”. Mino aho fa ianao sy ny vadiny dia tena mandeha ny elanelana sy ny toy izany aho mirehareha ny dingana izay nitondra talohan'ny fanambadiana. Toa samy ianareo nandray ny committment tena zava-dehibe, izay mitehaka.
Tony Doyley • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:03 aho • navalin'i
Tena fitahiana ny mamaky ny bilaogy momba ny fanambadiana ao amin'ny dieny mbola kely. Nanambady ny vadiko amin'ny 18 ary nanana tokantrano sambatra ho an'ny 10 taona izao. Azo antoka isika efa nanana soa sy ny ratsy, fa mino aho fa Andriamanitra dia nitari-dalana antsika hatrany izay taona maro, ary ankehitriny dia matanjaka noho ny hatramin'izay. Misaotra anao noho ny fijoroana ho vavolombelona mahatalanjona.
KLE Photography • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:03 aho • navalin'i
Arahabaina amin'ny tanora ny fanambadiana! Izaho sy ny vadiko nandeha nitety ny toy izany, rehefa nivady izahay 8 taona maro lasa izay amin'ny 20 taona! Noho izany dia mahalala tsara izay ianao mandalo! Nihevitra ny olona nivady izahay satria bevohoka (Dia tsy) na satria tsy ara-dalàna vahiny (dia ny olom-pirenena Amerikana). Izahay tsy manana betsaka ny namana ao amin'ny zorony raha mbola manao na inona na inona. Fa ankehitriny kosa, ao amin'ny 28 avy manodidina izy ireo ary miezaka ny “manatratra.” Faly aho Andriamanitra nitso-drano ahy ny vadiko na ny taona. Andriamanitra anie hitahy anareo roa!
BTW Isika dia miaina ao amin'ny faritra DMV! (MD) Angamba isika rehetra dia afaka hihaona na mandeha any am-piangonana miaraka! Mbola tsy manana namana manambady LOL.
KevinFerere • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:03 aho • navalin'i
Tsy mino aho na inona na inona no efa nangalatra avy aminao, fa izay tena manome ny. Tena mahafinaritra ny manana rafitra ao amin'ny Baiboly, saingy miakatra ho any aminareo mba hibaiko ny fiainanao, Tsy misy boky; na dia teo aza ny tari-dalana fa manome.
Tena maha-piderana nataony sy ny tanora, Fa anisan'ny izay “filan'ny tanora” dia ny fianarana sy ny mitombo azonao avy amin'ny fihaonana sy ara-tsosialy isan-karazany fanaovana ny vehivavy. Ny fianarana ny zavatra tianao sy tsy tia hanao, jereo, sy hahatsapa; fa tsy ho toy izany ny sehatra voafetra ho olona iray monja.
Tsy afaka milaza tena fantatrao hoe iza ianao ary inona ianao momba ny, na inona no tena tianao, raha tsy nifandray Fa mainka vehivavy hafa ho azy ireo mba hanehoana fa ho anao. Tsy fantatrareo ny fitiavana raha tsy fantatrao izay fa tsy.
Guest • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:03 aho • navalin'i
Tsy mila mahafantatra izay fitiavana tsy raha fantatrao ny fitiavana. Ahoana no ahafantaranao raha misy olona manome anao sandoka $100 volavolan-dalàna raha tsy fantatrao ny tena $100 Bill mitovy. Tsy misy afa-tsy tena iray $100 volavolan-dalàna, mianatra fotsiny izany ary afaka milaza raha misy olona manome anao sandoka. Toy izany koa ny fitiavana. Maro ny hosoka avy any, Fa raha fantatrao ny tena no, dia ho afaka ny mamantatra ny sandoka. Koa satria Andriamanitra dia fitiavana, na inona na inona ratsy fanahy tsy afaka ny ho fitiavana.
KevinFerere • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:04 aho • navalin'i
Noho izany dia tsy maintsy mampiaraka manodidina sy mihaona sy manao firaisana amin'ny olon-kafa. Ny teboka marina. Inona no ratsy fanahy dia subjective. Mety miezaka ny ho dalàna momba izany satria amin'ny maha hanao izany, na izany aza, dia tsy maintsy hamotsotra ireo idealy maha fa misy faritra fotsy be loatra eo anivon'ireo teny manodidina.
Angeldoll1 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:04 aho • navalin'i
Izaho tsy mitovy hevitra amin'ny fanambarana firaisana ara-nofo amin'ny olon-kafa- STD ny, SIDA sy ny bevohoka tsy, dia ny vokatry ny fifandraisana toy izany. Raha misy manenjika aza fifandraisana toy izany, izy ireo araka ny tokony tsy mianatra momba ny fanoloran-tena sy ara-panahy lalina kokoa sy ny mampiavaka ny fitiavana, fa tsy ny filàna. Ary izaho tsy mitovy hevitra amin'ny fomba fijery ny hampiaraka manodidina eo anatrehanao te hanao satria “niaraka manodidina” dia tsy zavatra tena ilaina ny mahafantatra ny vady avy amin'ny nonspouse. Araka an'Andriamanitra dia olon-droa mikasa / mampiaraka no natao ho ny olona araka izay aseho ao amin'ny Baiboly kosa mutiple manana mpiara-miasa, kisendrasendra manana firaisana ara-nofo no toetra ny biby.
AJ • Oktobra 3, 2013 amin'ny 3:46 PM •
Angeldoll1it tsara tarehy tsotra loatra aminareo ny mieritreritra fa tsy ara-panambadiana rehetra voatery mitarika ho amin'ny firaisana ara-nofo “STD ny, SIDA sy ny bevohoka tsy”… fa mazava ho azy, ianao tsy fantatrareo fa raha tsy naka ny fotoana mba hahazo ny lohanao avy amin'ny boky antitra be vovoka sy hahazo ny fiainana ny sasany traikefa.
Ianao mijery izany ratsy. Raha toa ianao matotra sy hendry ianao ampy mandeha izany ny lala-mahitsy. Arakaraka ny tsy zavatra, ny ho akaiky kokoa azy ianao. Mifantoha amin'ny zavatra tsara, ary izany no hahazo ianao. Fa mazava ho azy ny fivavahana tsy mampianatra anareo fa.
Josh • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:04 aho • navalin'i
“Manana fitiavana lehibe noho izao tsy misy olona, fa nisy olona manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.” (John 15:13) Fantatrareo ny fitiavana raha mahalala an'i Kristy.
azafady tompoko, raha ianao handeha regurgitate soratra masina, ny kely indrindra azonao atao dia ny mampihatra ny hevitra manokana ho azy. Tena boky, tsy miteny mpitari-dalana.
izy • Oktobra 3, 2013 amin'ny 12:25 PM • navalin'i
Ny maka ny soratra masina dia ny fomba ratsy sy ny hevitrao ianao projecting ny tenanao ho toy ny Kristianina, izay tsy manaraka ny Baiboly fa “andinin-tsoratra masina” izany, afa-mifidy ny hiaina araka ny fehezan-dalàna sy ny Picks ary mifidy izay, na inona na inona raha manaraka izany izao dia ny….
Ny ankamaroan'ireo izay tena milaza ny hijanona eo ny fampianaran-diso.
Gabe Taviano • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:04 aho • navalin'i
Mahafinaritra ny mahita anao bilaogy eto Trip! Misaotra mivavaka ho ahy ity herinandro ity, Andriamanitra no antoka tsara.
Ny adala zavatra momba anao hanambady ka zazalahy kely dia hoe ny sofinao sy ny masonareo efa nosokafana ho an'Andriamanitra bebe kokoa eo amin'ny taona vitsy kokoa noho ny sasany izay efa nikatona Azy eny noho be intsony. Fantatrareo fa Andriamanitra dia ao anatin'ny fanambadiana ny marina toy ny roa ianao, ary izany no lehibe. Misaotra ny fizarana!
Madeleine Farrell • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:04 aho • navalin'i
Izany no dingana tena tsara heviny. Nanambady aho amin'ny 17 ary ny vadiko dia 19. Tamin'ny fotoana izahay dia tsy Kristianina, ary koa, izahay tsy 'maintsy’ hanambady. Mbola noho ny antony izahay dia. Efa nivady efa ho 28 1/2 taona izao, ny ray aman-dreny ny 5 sy ny raibe sy renibe ny 2. Tiako ny fiainako. Tsy hoe nisy fotoana eo amin 'ny fanambadiana fa ny anankiray amintsika te-handeha fotsiny izy, ary tsy niverina, tsy hoe fahatezerana sy ny lolom-po tsy ampahany amin'ny fiainantsika isan'andro mandritra ny vanim-potoana, na ny fieritreretana E. nanao fahadisoana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika fa tsy ny hevitra dingana. Fa izahay nanao. Ary raha ny fisaraham-panambadiana dia tsy safidy, Andriamanitra dia mitondra ny fanasitranana ara-potoana.
Nanambady ny zanako vavy amin'ny 20 ka tsy nisy nahazo fampaherezana ve izy avy amin'ny olona. Dia tsy hahatakatra hoe nahoana ny olona mihevitra fa ala nenina farany fa tsy ho fitahiana ara-potoana. Na dia teo anivon 'ny fiaraha-monina kristiana.
Ny lahy amin'ny lafiny iray hafa amin'ny Noely nanambady ny, teo amin'ny faha- 27. Fotsiny dia tsy nahita ny marina ankizivavy. Zavatra iray.. tsara zazalahy / ankizivavy mandeha ny e tsara zazalahy / ankizivavy na dia amin'ny fotoana sarotra. Fotsiny hifikitra amin'ny The Cross.
CL • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
I Tena manaiky izany tanteraka. Maro dia maro ny olona toa mihevitra fa ny fanambadiana Mahatsiravina indrindra ary tsy misy tsy tokony “zozoro” ho ao anatiny, nefa dia zavatra Andriamanitra dia te-hampiasa ny hitahy sy hanamasina antsika. Misaotra anao noho ny lahatsoratra!
>> Fa rehefa nijery ao amin'ny Soratra Masina dia tsy nahita zavatra toy ny, "Ny fanambadiana mira fahafatesana! Mandosira avy amin'izy io!"na, "Ataovy ny fanambadiana eny mandra-tsy nataony intsony intsony,"na, "Ihany no manambady rehefa antitra loatra ianao hankafy ny fiainana,"na, "Play an-tsaha mandritra ny fotoana fohy ary avy eo dia haka ny tsara indrindra."
reny • Desambra 9, 2014 amin'ny 1:48 aho • navalin'i
Misaotra betsaka noho ny fitsidihana ny bilaogy – Mino aho fa I-kevitra ny fahana adedrss ho anao (I nandefa izany amin'ny fanehoan-kevitra). Manana ny hany malalako fianakaviana, fa momba izay ihany! Arahabaina amin'ny fitsingerenan'ny!
Praisemovement • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
Misaotra noho ny mangarahara sy ny “mijery an'i Jesosy ny fanaovana ny tsara”. Very saina fanajana ny fomba livin'and bringin’ voninahitra ny Teny.
Andrea Paige Jackson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
Izany no fijoroana ho vavolombelona mahafinaritra. Ary ianao dia nampakatra azy ho eo sy ny vadiko ny fahafolo taonan'ny! (Nivady izahay OLD, anefa.) : )
Jcsmsoul • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
Andriamanitra hitahy U rahalahy! fantatro tsara izay U hoe na dia nahita ny Tompo any aoriana any, ary tiako aho nanambady thats Nohazavain'ny mpanompon'Andriamanitra iray tsy mivadika amin'ny vadiny! dayz ireo ny tena sarotra ny mahita fa! ary ny antony hafa no manantena sy mivavaka aho, hanambady ary hahita ny anankiray tsy ao satria mahatsapa ho meloka U dont rehefa manao fitiavana, rehefa nanambady an'i Ora! Andriamanitra hitahy U!
Jazmin • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
Misaotra betsaka Tsy izay rehetra hahita ny fanambadiana ho toy ny fitahiana. Ireo izay matoky sy mino an'i Jesosy Kristy Tompontsika dia. I mba Nanambady amin'ny mbola kely taona, ary amin'ny 28 taona izaho sy ny vadiko no 3 tsara tarehy zanakay ary ny fiainantsika dia feno fanoloran-tena no tokony hankalazaina, ary manompo ny Ray any an-danitra. Ny fanambadiana dia tsy mora aza, dia manana izany soa sy ny ratsy, fa amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fileferana ny sitrapony misy mahay mitombo. Misaotra betsaka noho ny tantara mahavariana dia tena fitahiana. Ry Tompo mbola handefa anareo sy ny vadinao mitombo mangataka ny fahendrena ary indrindra ny fitahiana maro ao amin'ny famindram-po.
Tachy Musica • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
Nanambady aho izany “tanora” ihany koa, ary izany no fitahiana, miaraka foana izahay (anisan'izany ny zanakay vavy mazava ho azy), dia mizara ny zava-drehetra, ary hanampy ny tsirairay, vahoakan'i sasany mihevitra fa raha hanambady tanora toy izany dia ho mandritra ny fotoana fohy, Fa isaorana Andriamanitra no efa 8 taona manambady ary manan-danja indrindra miezaka servin’ Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra…fitahiana
Agopylove09 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
izany no izy awesome!! im 25 ary ive efa nieritreritra ny zavatra rehetra, tonga miaraka amin'ny maha-tsara ny vadiny sy ny tena maha-manaiky sy manana an'Andriamanitra ho ny foibe sy hitady foana ny toroheviny ho an'ny rehetra sy marina tena mamela Kristy hitarika sy ny fananganana ny fifandraisana eo amin'ny mafy orina tany 'i Kristy jesus..falling-pitia Mpamonjy antsika aloha dia tena tsy maintsy!! manana izany fifandraisana akaiky aminy alllows anao hitombo sy hahafantatra izay tia tena ary Andriamanitra dia manome ny fitiavana izay U homena ny vadinao.. toy izany greatful ho Mpamonjy no manome foana ..<3
Joe Stevens • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Am iray oldee izay mifanaraka tanteraka amin'ny Triplee. Na dia mazava ho azy fa tapaka lalan-dra hafa (taona) fa samy hafa ry namana. Ary ny olona rehetra dia tsy maintsy-bady any amin'ny Andriamaniny-natao fotoana. Izaho dia 50 yrs antitra, natao nanambady ny malalany, tamin'izaho 23 ary izy 20! ankehitriny 27 taona sy 1 volana taty aoriana, misy mitohy (tsara) afomanga eo amintsika, Mbola madly amin'ny fitiavana, tsara indrindra namana sy miara-mandeha ao amin'ny fikasan'Andriamanitra. Tsy hatakaloko ny taona nanambadiana aho 6 volana tatỳ aoriana! Fa na dia ny ankizy dia tsy maintsy mahafantatra ny circumstacces dia tsy voatery mitovy ny antsika, na dia ny timings sy ny drafitra ho azy ireo mitovy.
Femi mpanapitrisa • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Am iray oldee izay mifanaraka tanteraka amin'ny Triplee. Na dia mazava ho azy fa tapaka lalan-dra hafa (taona) fa samy hafa ry namana. Ary ny olona rehetra dia-bady any amin'ny Andriamaniny-natao fotoana. Izaho dia 50 yrs antitra, natao nanambady ny malalany, tamin'izaho 23 ary izy 20! ankehitriny 27 taona sy 1 volana taty aoriana, misy mitohy (tsara) afomanga eo amintsika, Mbola madly amin'ny fitiavana, tsara indrindra namana sy miara-mandeha ao amin'ny fikasan'Andriamanitra. Tsy hatakaloko ny taona nanambadiana aho 6 volana tatỳ aoriana!
Reverandjeff • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Fantatro tsara koa rehetra ho iray… Vao avy nankalaza ny faha-13 taona ny fanambadiana, ary aho 35.. Toy izany koa aho ry namana manontany ahy toy izany koa, fa izahay vao nahalala an'Andriamanitra na nanendry azy, ary natao izany. Izahay dia nihaona fiainan'ny tsirairay amin'ny fotoana tena lehibe izay niafara maha samy hafa vatofantsika, amin'ny mahazatra vatofantsika 'i Kristy. Ny ampahany tsara indrindra dia rehefa mahazo ny fahafahana miresaka amin'ny tanora ny olona izay miady mafy amin'ny fifandraisana / fanambadiana ary mahazo milaza ny fijoroana ho vavolombelona miavaka !!! Arak'izany, nanana ny sasany amin'ireo adihevitra amin'ny JPaul, taona vitsivitsy lasa izay.. Small izao tontolo izao !!! Andriamanitra dia nanome azy ireo izay mitady ny tsara rafitra SAROBIDY, ary Isika dia manome lanja ny taolan-tehezana fa tsy runnin taorian'ny chickenbones. :)
Jeff Young • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Oh sy ny liana, jereo anay nivoaka amin'ny http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Ny dadako & Sekoly ambaratonga faharoa i Neny dia ny olon-tiana, ary nivady izy ireo rehefa nahazo diplaoma (na dia 18 taona). Mbola izy ireo sambatra am-panambadiana mandraka androany ary mbola tsy maneho na nanenina mihitsy ny fiainany miaraka. Lasa olon-dehibe atao aloha amin'ny fanambadiana – ary ny toe-tsaina momba ny fanapahan-kevitra fitaratra, ray aman-dreniko. Araka an'Andriamanitra sy ny fanambadiana dia vitsy lavitra eo amin'ny taonjato ity….Andriamanitra hitahy anao sy hiaro anao ho sambatra, fara fahakeliny, 50 na 60 taona!
Monique-Jolicia • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Aiza ny vadiny Tantara?
Jeffreycotton7 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Misaotra anareo aho sy ny vady be dia be noho ny fizarana ny tantara. aho 21 ary mahatsapa ho toy ny mandalo aho efa ho ny toe-javatra toy izany koa. Fotsiny aho tsy mbola manambady. Aho fa miandry fisainana ny antony raha toa ianao sy ny mpiara-miasa dia amin'ny fitiavana, na ara-panahy, tsara, ary tanteraka amin'ny alalan'ny olon-kafa tsirairay maso. Ny ankizivavy ka tsy azo antoka fa tiantsika ny hivady indray andro. Fa na izahay samy te-hanambady, izy kokoa ny maka ny fotoanany; isika dia manana ny fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao karazana olona. Bebe kokoa aho ny iray ASAP nampanantenaina dia tsy rahampitso karazana olona. Koa nahoana no miandry? Izy no tena marani-tsaina ankizivavy. Izy Mampahatsiahy ahy ny vadinao sy ny tantarany kely. Mieritreritra fa ny zavatra mety hahazo an-dalana ny asa am-pianarana sy ny tanjona. Fa izany bebe kokoa ho any amin'ny lahateny ny ankizy aorian'ny fanambadiana. Foana aho hilaza aminy fa tsy te-hanana ny zaza voalohany akaiky 30 taona. Tsy tiako ny tenako mba hanomboka hahazo malemy kokoa noho ny taona, izay mety hanaovana azy mafy kokoa sy mandreraka kokoa ny milalao manodidina miaraka amin'ny ankizy. Mila ... aho 7 amin'ny indrindra ary 3 amin'ny kely indrindra. Koa ny tsara hanomboka amin'ny taona mendrika. Fa izaho kosa hiezaka foana mba hamela izany ao amin'ny tanana, ary tsy manahy be loatra momba izany.
aneetarh • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:07 aho • navalin'i
misaotra be dia be U Trip N Jess, N rehetra Hu Deot dia nizara ny fampaherezana amin'ny fomba iray na D Oda. izao intsony aho matahotra ny gettn nanambady tany am-boalohany indrindra fa raha ny marina e considern Deot samy tia an'Andriamanitra isika. Andriamanitra BIS in…
Dash • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:07 aho • navalin'i
Jannon Fitzpatrick, Manaiky aho fa Andriamanitra dia fitiavana. Ny hany fomba hiaina ny tena fitiavana dia ny hiaina ilay namorona ny fitiavana. Eo ny olona dia afaka mamorona na inona na inona izany raha tsy fakan-tahaka toa isika dia mamela an'Andriamanitra hitari-dalana ny fitiavantsika fiainantsika koa. “Manana fitiavana lehibe noho izao tsy misy olona, dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao 15:13. Ny fitiavana tsy mahita ny tena fahafaham-po (KevinFerere), na mahita olona iray izay afaka manome fahafaham-po sy faniriana mandrisika herinaratra ao amin'ny atidoha. Mampihomehy, ny sarin'ny “Famoronana Adama” eo amin'ny pejy Renaissance dia avy amin'ny vanim-potoana izay, raha ny foto-kevitry ny fitiavana sy mampiaraka nivadika ho zavatra ho fanomezana fahafaham-po ny tsirairay na inona na inona ny vola lany amin 'ny olon-kafa. Izany sary hosodoko ao nanda ny finoana katolika mihitsy no milaza fa i Adama dia manolo-tanana izy ka nandray anjara tamin'ny ny zavaboariny. Ny Irony ity, Michelangelo tamin'ny faran'ny ny fiainany nahita izay nataony sy nibebaka, miezaka afangaro Kristianisma sy ny maha olona: (Lehilahy ho ny ohatry ny zava-drehetra). Io foto-kevitra ny fitiavana no toerana no Mino aho fa ianao avy ? dia ny fanao toy izany koa izy ireo amin'ny teny grika, Renaissance, sy ny kolontsaina ankehitriny. Tena Misy “na inona na inona atỳ ambanin'ny masoandro vaovao”-Solomona, koa avy ao amin'ny Baiboly.
Paul Jones • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:07 aho • navalin'i
Hey diany nivady satria aho 22 ary 28 ankehitriny. ny faha-6 vao nanana anv. Andriamanitra hitahy antsika amin'ny 4 tanora. Mivavaka aho mba izy foana fitahiana anao sy ny fianakavianao.
Danz_17unlocked • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:07 aho • navalin'i
Izany no lovely Trip, Andriamanitra anie hitahy be dia be sy ny Ora U vadiny… ary aoka olon-kafa amin 'ny nitso-drano noho izany ^ _ ^ <3
CLL • Oktobra 3, 2013 amin'ny 12:15 PM • navalin'i
Tena fijoroana ho vavolombelona mahafinaritra ny hatsaram-pon 'Andriamanitra sy ny zavatra atao eo amin'ny fiainana izay nitolo-batana tanteraka ho Azy. Izaho sy ny vadiko dia nanambady somary tanora (amin'ny 24) ary tahaka anao, ary ny vadinao, Rehefa hitan'Andriamanitra fa mety ny hiara-hitondra antsika ny voninahiny. Ny zanakay lahy nanambady tanora, taona 20 tamin'ny fiandohan'ity taona ity…izay naneho fahatalanjonana :-) ary tena nahita zavatra tsara tao amin'ny vadiny araka an'Andriamanitra. Naniry izahay na inona na inona ho azy intsony, ary izany tso-drano.
Karenda • Oktobra 3, 2013 amin'ny 12:18 PM • navalin'i
Tena lehibe lahatsoratra! Izaho sy ny vadiko nivady tanora ihany koa, aho 22 ary ny vadiko dia 25. Fotsiny isika nankalaza 15 taona ny fanambadiana. Jesosy, dia nitondra antsika ho akaiky kokoa mivady no niara-nandritra ny taona maro, mampianatra antsika “ho faty ho antsika” mba ho tsara kokoa tia sy hanompo ny hafa. Ny fitiavan-tena no laharana voalohany mpanimba ny ankamaroan'ny fanambadiana.
Misaotra anao noho ny vonona ny ho eo aloha sy ny marina mikasika ny lohahevitra momba ny fanambadiana araka ny mifandray amin'ny Soratra Masina!
Michael • Oktobra 3, 2013 amin'ny 1:16 PM • navalin'i
Mivady nanambady tany 21 ihany koa, ary izay 11 taona sy 6 ny ankizy lasa izay (mombamomba / nolaniana / Foster). Tsy fantatro aho “tanora loatra” hanambady, Vao avy nahafantatra izy no olona tsy te-hiaina tsy misy! Andriamanitra no tsara.
AJ • Oktobra 3, 2013 amin'ny 2:16 PM • navalin'i
Famakiana anelanelan'ny tsipika: dia tia an'i Jesosy sy izahay horny.
Hitako mitranga izany ny fotoana rehetra ny Kristianina, ary mieritreritra toy ny fanehoan-kevitra ireo izay mandihy manodidina ny tena antony dia mahatsikaiky. Tsy Te ho fahotana ny manao firaisana fotsiny, noho izany dia lavitra fahendrena kokoa ho maika ho fanoloran-tena mandritra ny fiainana.
Clara • Oktobra 3, 2013 amin'ny 2:21 PM • navalin'i
Andriamanitra, Izay nanomboka tokoa fa ny fanambadiana dia hahita anareo amin'ny alalan'ny rehetra. Ianao no tena famporisihana tokoa ny tanora sy ny mpivady kristianina ny tanora Trip. hotahian'andriamanitra anie ianao!!
Job • Oktobra 3, 2013 amin'ny 2:52 PM • navalin'i
Nanambady aho tamin'ny taona 21 ary amin'ny taona iny ihany rehefa Trip Lee, in 2009. Nihaonako taminy tao am-piangonana, tamin'izaho 16 taona ary efa nivady nandritra ny efa ho 8 taona izao. Izahay nanompo an'Andriamanitra izy sy AYCM asa fanompoana, manolo-tanana ny tanàna sy mizara ny tenin 'Andriamanitra amin' ny Filipina. Nilaza tsirairay izahay isan'andro “Tiako ianao, satria hitako fa tena tia an'Andriamanitra ianao”. Tsy manenina mihitsy mangataka azy ho an-tànany ao amin'ny fanambadiana. Ny lasa 4 taona ny fanambadiana no fitahiana.
THATMAN • Oktobra 3, 2013 amin'ny 2:55 PM • navalin'i
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< dia moa Ity lehilahy?? tpt
Isaac • Oktobra 3, 2013 amin'ny 4:06 PM • navalin'i
Ny tenin'Andriamanitra tokoa ambony indrindra. Ohabolana 18:22 midika mazava izany avy.
”Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa, Sady mahazo sitraka amin'i ny Lord''.
Ny maka Fa izay te hanambady dia ny voalohany indrindra mangataka ny tari-dalana eo amin'ny fisafidianana ny tsara mpiara-miasa. Tsy toy ny olona shouldnt manao ny safidiny manokana, ary forcifully hangataka amin'Andriamanitra mba hitahy azy. kosa, tokony hitolo-batana amin'ny fankatoavana tanteraka, hiezaka hahazo ny fahasoavana sy hangataka tari-dalana mba hanaraka ny tari-dalany ho amin 'ny fiainantsika.
SteveMcMillon • Oktobra 3, 2013 amin'ny 4:40 PM • navalin'i
Manaja izany be!! Ny mampahery dia satria efa nanana faniriana hanambady hatramin'ny aho 6 yrs antitra sy alot ny olona mametraka ahy ho azy. Amin'ny fomba maro tsy ampoizina eo dia namorona ahy. Misaotra anareo indray noho izany!
Terri • Oktobra 3, 2013 amin'ny 4:59 PM • navalin'i
A kely ny 35 taona maro lasa izay dia nanambady ny malalany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Samy izahay 18, efa ho 19. Naysayers maro izahay sy ny raiko dia nanantena hahazo nisara-panambadiana aho ka hahita dokotera. Rehefa nandamina ny fanambadiana Andriamanitra tsy mampaninona izay ny taona ny mpivady vao. maro ny fitahiana!
Missy • Oktobra 3, 2013 amin'ny 6:01 PM • navalin'i
Nanambady aho tanora ihany koa (20 mba ho marina). Ary isaky ny 32, Tsapako toy ny hoe afaka manambady na oviana na nanome taona, ary na oviana na nanome fotoana na iza na iza… ary Andriamanitra no hampiasa ny olona iray izay tia Azy na inona na inona toe-javatra mba hifandray akaiky kokoa ny tenany fa olona… rehetra tsy maintsy ho vonona ny ho masina tahaka Azy masina. Izany no mahatonga ahy tsy mino misy “ilay tokana”… Ny olona izay misafidy ny hanambady, lasa “ireo” for eachother :)
Missy • Oktobra 3, 2013 amin'ny 6:02 PM • navalin'i
nefa mazava ho azy izany ihany no Marina raha toa samy mpino
Johnny • Oktobra 3, 2013 amin'ny 10:27 PM • navalin'i
Misaotra anao indrindra. Izaho sy ny vadiko manana tantara toy izany koa. Nisy namana iray nandefa ity amin'izao fotoana izao ary izany dia ny zavatra nilaiko. Miderà ny Tompo!
Lise • Oktobra 3, 2013 amin'ny 10:39 PM • navalin'i
Misaotra anareo ity lahatsoratra ity! Izaho dia 36 taona ary efa nivady 19yrs…yep, aho 17 raha nanambady ny vadiko 18yr taloha! Manana-janaka enina, tia ny Tompo sy tena sambatra :) isika dia nametra-panontaniana toy ny fotoana rehetra sy raha mety tsy ho malaza safidy na ny safidy tsara ho an'ny maro, Tena faly aho ary tsiambaratelony andavanandro fa nanao safidy tsara ho antsika.
Steffan • Oktobra 3, 2013 amin'ny 11:18 PM • navalin'i
Izany no mahagaga. Fantatro fa be dia be ny olona izay mihevitra izany no fahadisoana lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Izaho dia 22 ary tena no mihevitra izany amin'ny olona iray aho, efa mahalala sy tia sophomore nanomboka ny taona lycée. Azoko antoka ny zavatra tsy tara-masoandro sy havana teny ho anao, na ahy tokoa ve izany mba ho ahy. Izaho manolotra anareo nametraka manokana ny negativity rehetra sy ny mijery ny sary lehibe kokoa, ary inona no tsapanao Andriamanitra hitarika anao ho any. Raha tsy misy olon-kafa faly mandrakariva ho anareo, I tena aho.
Kim Hunter • Oktobra 4, 2013 amin'ny 8:30 aho • navalin'i
Dia nahita ny vadiko amin'ny 14 nivady izahay, tamin'izaho 21 ary izy 23 izahay efa nivady nandritra ny 22 taona ary nanambady ny 15 ireo 22 misy na inona na inona ratsy ny tanora ny hanambady olona iray fotsiny ny fomba mijery ny fiainana….satria tena ny lifr no hanaovanao azy ianao….ary eny izaho sy ny vadiko no voavonjy sy mino an'Andriamanitra sy miaina ny fiainantsika ho azy amin 'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hain'ny healthly indrindra fa ela be fitiavana ny fanambadiana na inona na inona, fa mora amin'Andriamanitra dia afaka manao izany…….hitahiana!!
miresaka momba: Nahoana no toy izany aho, manambady tanora? - Fanjakana Fanjakana Cakers Cakers
Cherisse • Oktobra 4, 2013 amin'ny 9:43 aho • navalin'i
Tena fitahiana ny mahalala ny Tompo, ary hahatakatra ny teniny. Enga anie nisy olona maro toa anao. Aza avela hanakivy anao ny Devoly. Fantatsika izy na aiza na aiza.
GrantYoung • Oktobra 4, 2013 amin'ny 12:44 PM • navalin'i
Mivady nivady fony mbola 22 ary nanana traikefa toy izany koa. Friends izay voavonjy sy tsy voavonjy te hamela ahy hahafantatra bebe kokoa aho ny hiaina fiainana. Ny mpanety Nampahatsiahy ahy ny zavatra rehetra sy ny fety ny clubbing azoko atao. My “akaiky” namana nanazava fa nisy hafa hazandrano any an-dranomasina mba hijery. tsara, tena nivady izahay nanodidina izany fotoana izany 3 mpivady hafa ny taona no! Vitsy an'isa izahay fa antoka fa tsy irery ary mampahery ny mahatsiaro fa.
By ny fahasoavana isika vao nankalaza 3 taona maro ary natao efa awesome! Misaotra anao noho fizarana Trip!
marika • Oktobra 4, 2013 amin'ny 4:24 PM • navalin'i
Ny maka ho fa raha handeha hanambady ka tanora, ianao mahafantatra tsara kokoa ny vokatry ny fanaovana izany. Tena sarotra na dia ao amin'ny toe-javatra tena tsara indrindra. Raha tsy vonona ny hiasa ny mafy ve ianao niasa sy fanatitra alatsa-drà sy tanteraka hiatrika fahadisoam-panantenana maro sy ny ratram-po, Tsy sonia ho azy. Na izany aza, raha afaka hiaritra (ary ny olona sasany manao) raha afaka po indraindray.
Kevin • Oktobra 4, 2013 amin'ny 5:42 PM • navalin'i
Tiako io fomba fijery ara-Baiboly mifototra. Tena tsy fahita firy eo amin'ny Kristianina Amerikana, toerana ara-kolontsaina sy ara-tsosialy ny rafitra dia tena manohitra ny fanambadiana, ny mahita ny tanora iray, na dia ny olon-dehibe, Manana izany fomba fijery matotra ara-panahy ny hasarobidin'ny ny andrim-panjakana. Miorina amin'ny maro ny fanehoan-kevitra aho namaky, io fomba fijery toa izany ny olona avy any ivelany, na dia ao amin'ny Fiangonana isika, satria efa namela ny tenantsika mba miankina manoloana ny fitsipika ara-tsosialy ny andro, fa tsy ny fahamarinana ara-baiboly ny zavatra mihazona ho sarobidy sy sarobidy. Mivavaka ho anareo Trip, foana ny fizarana ny filazantsara sy ny fahamarinan 'ny Teny tonga azo ampiharina sy tena izy eo amin'ny fiainan'ny mpino.
PastorRob • Oktobra 5, 2013 amin'ny 6:55 aho • navalin'i
Tiako ho fantatrao Trip- Lee I nanambady 2 volana taorian'ny Nitodika aho 21. Andriamanitra ao aminy rehetra? Izy rehetra ao aminy na dia eo aza ny olona ny fanjohian-kevitra sy ny antony tokony tsy hanambady fa nila miandry. Lehilahin'Andriamanitra no nivady 16 taona maro izao miaraka amin'ny 2 Beautiful zazavavy ary izaho no tsara greatful an'Andriamanitra ho hendry araka an'Andriamanitra, manan-kaja ravaka soa. Ny fijoroana ho vavolombelona momba ny hatsaran-tarehy no natao ho anao hilaza izany!!!
miresaka momba: Single V. manambady… | Ny hevitry ny fiainana
Mavis • Janoary 28, 2014 amin'ny 10:10 aho • navalin'i
Manana torohevitra ho an'ny tanora rehetra. Raha toa ianao ka 18 na ny, manomboka mitady vady! Firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, raha ho entiko ho afa-tsy alahelo, leaness ny aina sy ny ratsy ny fahasalamana, ara-tsaina sy ara-batana. Ary rehefa manambady dia fifaliana sy ara-toekarena Booster! Afaka tratry ny ananany izany, ary mankafy bebe kokoa natao lufe betsaka kokoa raha tsy ianao irery. Ray aman-dreninao angamba natao nisara-panambadiana satria tsy manaraka ny fony ny tanora! Tsy manana ny toerana hanazava izany rehetra izany, fa miorina ho mated. Manomboha manao yor lisitry ny dia tsy maintsy manana toetra avy hatrany ary hanam-bady raha mbola tanora ianao fonao manontolo mba hanome. Izaho dia 53 ary tena grayeful ho tokantrano sambatra. Nanambady aho tamin'ny 31 -vaky fo maro im-betsaka sy ny tanora, raha rava-lalana lalana tara loatra. Ny fanantenana tsy azo atao raha toa ianao dia ho hendry eo amin'ny tanora sy mankafy izany, rehefa manatrika ao!
GOSPELMAGDOTCOM • Febroary 6, 2014 amin'ny 8:33 aho • navalin'i
Ry Trip Lee,
Faly izahay mamaky ny lahatsoratra.
Afaka manome antsika ny fanomezan-dàlana mba handika ny lahatsoratra ho amin'ny teny Frantsay, ary ny hamoaka azy ireo eo amin'ny tranonkala: gospelmag.com?
Misaotra betsaka mialoha noho ny valiny.
Best ao amin'i Kristy,
famindram-po • Febroary 15, 2014 amin'ny 3:14 PM • navalin'i
Namako nividy ahy ity boky ity fony mbola tanora momba ny maha-tanora, mendri-kaja ny vehivavy kristianina. Mazava ho azy fa nampahery niandry mandra-aorian'ny fanambadiana sy ny zava-drehetra ary nanana andininy manerana. Tsy voalaza ary izy nitondra azy niakatra tenany fa tsy te ho antsika ny daty. Dia nanao voady ny tenako fa tiako ho amin'ny faritra ry zalahy (Mino aho fa tanteraka aho dia efa ho atao amin'ny outgrowing Fahasarotan-kenatro Aho). I no ta-hamonjy ny zavatra sasany ny fanambadiana sy eny fa ny lasa 2 taona aho nahazo ketraka. Nahatsiaro ho irery aho. Nanontany tena aho hoe inona no tsy mety amiko, ary raha mendrika aho. Tsy azoko. Tsy fantatro rehetra andinin. Mila mianatra bebe kokoa. Niezaka aho ary tsy te-hahafantatra fotsiny satria aho misy lehilahy Afaka ny ho tonga vaky fo ary afaka hitarika ahy nidina ny lalana Tsy tian'Andriamanitra ahy fa mahazo manirery. Tsy azo atao mihitsy ny mahita tsara tarehy tanora hafa amim-pitiavana. Fa tsaratsara kokoa raha manambady ianao ary fantatro fa tsy tsara ny ho saro-piaro fa izay rehetra milaza “Oh, Ho tonga izany mandritra ny fotoana”. Mihevitra aho fa tato ho ato ny momba azy io tsy tapaka. Nihaona tena mahafinaritra izany bandy. Manana toetra tena mitovy fa Jesosy nanao hoe tsy mandeha any am-piangonana. Nilaza izy fa mino an'Andriamanitra ary fantatro aho dia tsy hahatanteraka ny tenako fa tsy afaka ny tsy hanontany tena satria Tsy mino aho fa izy no mavitrika nitady an'Andriamanitra aho, raha handeha nanenina zavatra. Ny vehivavy dia tsy tokony hanova ny olona hanandrana sy reko. Tsy mitondra any amin'ny fahadisoam-panantenana lazaina fa. tsara, Reraka aho ny miandry. Heveriko aho mafy hianatra ny fomba. Aho anefa tsy manana firaisana ara-nofo. aho 23 ary mbola hijanona ho matanjaka ao amin'ny izany, fa sahiran-tsaina aho hoe nahoana aho tsy mendrika ny lehilahy ankehitriny. Ny olona rehetra hafa mahazo izay tadiaviny. Tena manelingelina koa fa tsy nitsahatra nieritreritra ry zalahy. I tratry ny ananany izany ketraka indraindray. Raha manambady lehilahy izany ary tsy niova no ho antonona zioga? Ny olona sasany dia manana ny zava-drehetra. Ary tsy aho hoe vola. Fotsiny aho te olona izay mankasitraka ahy. Be loatra ny manazava.
Natalie • March 11, 2015 amin'ny 1:21 PM • navalin'i
Mbola ianao ihany no 23! :) Aza manahy mikasika ny tsy nahita ny “marina” iray, tsy misy olona iray monja avy teo izay safidy tsara. Sy marina Izy ka hanazava: Ianao no hoatra ny IT. Misy antony fa Hianao dia ianao sy ny eto an-tany amin'izao fotoana izao. Ianao no sarobidy amin'i Jesosy, vao mamaky sy mitaky ny fampanantenany rehefa manomboka mieritreritra fa tsy mendrika izany. Ny toerana tena dia: “Izaho tsy handao anao na hahafoy anao Izy.”
Nisy olona fantatro nisara-panambadiana vao haingana natao, ary ny olana lehibe ao amin'ny fanambadiany dia hoe ny mpino izy ka tsy hita izy. Ny fanapahan-kevitra dia tsy maintsy manao dia ho “Andriamanitra mendrika izany?” Hitady an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, dia hotarihiny anao. Dia Izy no hitari-dalana anareo. Izy no hanome ny fampaherezana ilainao rehefa mahatsapa be sy ketraka. Nisy zavatra hitako tena manampy ny mamaky ny Soratra Masina amin'ny feo avo alohan'ny handeha ho any am-pandriana, ary indrindra rehefa mahatsiaro nidina ho midina fanafihana avy amin'ny fahavalo. Ianao tsy fantatrao izay Andriamanitra fotsiny manodidina amin'ny zorony.. raha ianao ihany no miandry. Fantatro fa toa ka mafy sy manao ny marina, manorisory, fa raha mbola mikatsaka ny Tompo, Izy no fahafaham-po anao amin'ny vanim-potoana ity. Misy antony ianao ao amin'ny vanim-potoana! Tsy fantatsika mihitsy ny Andriamanitra dia hampiasa azy io ho toy ny fijoroana ho vavolombelona mba hanampiana ireo tovovavy izay miady amin'ny toy izany! :) Manantena aho nanampy tamin'ny fomba! fitahiana!
tshireletsopreciousntumo • Novambra 7, 2014 amin'ny 2:43 aho • navalin'i
Izao no nilaiko mba hihaino, misaotra anareo ary Andriamanitra hitahy
Micheala • March 22, 2015 amin'ny 8:32 aho • navalin'i
Nanambady aho amin'ny 21 ary efa tsara tarehy …
Tsy afaka manampy izay anao ho tia an'i na rehefa raiki-pitia aminy,
Tsy mbola nieritreritra aho no ho karazana hanambady tanora sy malahelo avy amin'ny “mahafinaritra ny zavatra” eo amin'ny fiainana .. fa aza ataonareo fa nanao, Vao avy nizara ny “mahafinaritra ny zavatra” amin'ny olona iray aho, ary tsy tia velona sary an-tsaina tsy misy.
Gisselle • March 28, 2015 amin'ny 7:41 aho • navalin'i
Hi Gisselle aho avy aho Honduras. aho 18 taona no ho sipako dia 19. nihaona 15 volana lasa izay tao amin'ny fiangonana tany New York! Mipetraka any Honduras.. Noho izany dia efa ela lavitra fifandraisana. Aho amin'ny taona faharoa ny oniversite sy ny sisa araka izay. Efa niresaka momba ny isika hanambady. Ary ny sasany ny havany sy ny anti-panahy avy amin'ny fiangonana manohana antsika sy milaza amintsika no zavatra tsara indrindra tokony hatao. Mbola milamin-tsaina aho momba izany.. Ny reniko dia tsy misokatra loatra ny momba ahy hanambady tanora toy izany sy mba ny rahavaviko. Nivavaka izahay satria nieritreritra voalohany momba ny fanambadiana ho toy ny mety. Raha afaka manoratra mailaka ahy ny ho velom-pankasitrahana aho!
Jennifer • Jolay 8, 2015 amin'ny 3:11 PM • navalin'i
Nivady izahay 21 taona maro lasa izay. aho 19 ary ny vadiko dia 21. -Pitarikay akaiky kokoa samy izy sy amin'Andriamanitra. Telo ny ankizy tatỳ aoriana, isika dia miandrandra ny manaraka 20.
Charles • Aogositra 9, 2015 amin'ny 11:07 PM • navalin'i
Fotsiny aho te-misaotra noho ny nizotra tamin'izay hitsiny avy lalana efa mitory teny Gods. Vao avy nijery ny 'Fallin’ mozika Video taorian'ny andro lalana sy ny fakam-panahy ary mahatsapa ho toy ny hoe Andriamanitra niteny tsara ho zavatra aho mandalo. Ny mahavariana Fanomezana ny fahasoavana izay mizara isika dia tsy azo refesina, na nalaina ho toy ny fanomezana. Misaotra betsaka noho ny fanokafana indray ny masony ho amin'ny zavatra toy izany aho fototra mandeha amin'Andriamanitra. Mivavaka ihany koa aho fa Andriamanitra dia hitahy anao eny amin'ny fanompoana.
Chidera • Aogositra 18, 2015 amin'ny 2:48 PM • navalin'i
Raha vao Andriamanitra mampiseho anao ny olona iray sy olona manana ny fitiavana an'Andriamanitra izany rehefa sy vonona ny hiara-mandeha aminareo ny lalana rehetra. tsy maninona izay taona, indray mandeha tonga ny fotoana manambady ianao. Ny zavatra fotsiny manaiky azy amin'ny lalanao rehetra, Ho izy handamina ny làlanao (Ohabolana 3:6). Fotsiny ny filan'ny nofo sy ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fotoana mety izy hanome anao Ho amin'ny mpanampy sahaza iza no handray mijoro eo aminareo amin'ny alalan'ny rehetra. Tsy te-anjara, dia tsy misaraka amin'ny amin'Andriamanitra. Rehetra ny fomba Maneke Azy, he'ell hahatonga ny lalana mahitsy.
Stacy • Desambra 14, 2015 amin'ny 3:57 PM • navalin'i
Ny lehilahy no 3/4 mainty sy fotsy ampahefatry.(Fotsy aho). Ny vadiko aho nanambady tanora koa I 18 handeha 19 ary ny vadiko dia 20. Nilaza taminay ny olona tsy, izahay manao fahadisoana sady andefasako amin'ny fisaraham-panambadiana. Izahay tsy nihaino nivady izahay, ary ankehitriny dia efa 16 taona. Andriamanitra no eo amin'ny fanaraha-maso.
jaysmith • March 12, 2016 amin'ny 7:34 PM • navalin'i
Kevin–ianao toa tahaka anao manan-teny kely midina. Ary ianao no miasa ny fomba niakatra. Tohizo hatrany, zanak'osy! Amin'ny farany, ny mahafantatra ny antsasaky ny tenanao ihany koa indrindra ny vattle, na dia eo aza misy fahadisoana. fitahiana!
TheRealHonestTruth • March 27, 2016 amin'ny 2:44 PM • navalin'i
Tsara ho an'ny olona avy any fa efa nitso-drano amin'ny tena Excellent vintana tsy misy fahasalamana olana mihitsy ary rehefa nanambady amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny vola be tokoa no be dia be fa tena feno fisaorana fa satria tena dia tsy ho nanan antony hitaraina rehefa maro amintsika no tsy ny tsara vintana mihitsy na dia maro taminareo no hanambady tanora loatra izay misy be dia be aminareo izay mbola miaraka amin'izao fotoana izao.
Tye Smith • Jona 26, 2016 amin'ny 9:55 PM • navalin'i
tena mikaroka dia nankany an-toby ny Zoma elivate 24/6/2016
RachelSanchez • Novambra 2, 2016 amin'ny 1:14 PM • navalin'i
Izaho sy ny vadiko nivady tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Izy dia 22, ary izaho 21. Hataoko fa nanontany ny fotoana rehetra ny antony tiako “manary ny fahatanorako lasa” na ny antony aho dia mieritreritra momba ny fanambadiana tany amin'ny oniversite. I mahagaga mahazo ny tena maharary fanehoan-kevitra avy amin'ny vehivavy anti-panahy, izay toa tsinontsinona ahy. Tena mampalahelo fa ny hafa dia tsy afaka manaiky fa raha ny marina aho tena mankafy ny fahatanorako amin'ny toerana tena indrindra miaraka amin'ny olona eto an-tany. Mampalahelo raha ny olona (na dia be taona taranaka) mihevitra fa tsara izany tsara ho an'ny olona eo amin'ny 20 taona mahery natory manodidina, fa rehefa manambady izany manafintohina sy mahatsiravina. Manantena izahay fotsiny ny fanambadiana dia afaka aingam-panahy ny hafa mba handray ny dingana rehefa mahatsiaro ho vonona, na inona na inona fiaraha-monina nilaza tamin'izy ireo.
Ny tena mampalahelo fahamarinana • Novambra 27, 2017 amin'ny 8:09 aho • navalin'i
Ary misy maro amintsika tokan-tena tsara ny olona izay tena manantena hihaona vehivavy tsara hanorim-ponenana any amin'ny, nefa indrisy fa mbola tsy tanteraka izany ho antsika. Ary ny lehilahy sy ny vehivavy izay tena tena Fitahiana ho ahy ny nihaona tamin'ny samy izy ary manana fianakaviana izay tena manana be dia be ny ho velom-pankasitrahana noho ny.
alvina.reborn • Janoary 3, 2018 amin'ny 2:39 PM • navalin'i
Thanks alot Trip. Nandritra ny taona maro aho no niteny ny tenako fa afaka hanambady afa-tsy lasa taona iray. Fa ankehitriny fantatro tsara kokoa.